I-WTN ineMibuzo emitsha yoKhuseleko kwiMarike yokuHamba yeHlabathi yaseLondon
Ikhaya » Amanqaku eendaba akutshanje » iintlanganiso » I-WTN ineMibuzo emitsha yoKhuseleko kwiMarike yokuHamba yeHlabathi yaseLondon
Iindaba zeManyano • Ukwaphula Iindaba zaseYurophu • Ukwaphula Iindaba Zamanye Amazwe • Iindaba eziziiNdaba zokuHamba • Ukuhamba ngeshishini • Utyalo mali • LGBTQ • Iindaba zeShishini lokuhlangana • iintlanganiso • iindaba • abantu • Tourism • Ukuhlaziya indawo ekuyiwa kuyo • Iindaba zeWired Travel • komzila Ngoku • Iindaba eziHlumayo zase-UK • I-WTN
Kuya kubakho iMarike yokuHamba yeHlabathi ebonakalayo kunye ne-WTM ebonakalayo. Namhlanje, iNethiwekhi yezoKhenketho yeHlabathi ifikelele kwi-WTM ngemibuzo emibini engxamisekileyo kunye nesibheno sokwenza indawo ebonakalayo yeNtengiso yeHlabathi yokuHamba ikhuseleke.
I-COVID-19 kunye entsha I-AY.4.2 eyahlukileyo ithatha iindaba eziphambili e-United Kingdom, kwiiveki ezimbini phambi ko Intengiso yeHlabathi yoKhenketho eLondon.
The Inethiwekhi yoKhenketho yeHlabathi namhlanje ikhuphe isibheno esingxamisekileyo kunye nombuzo obalulekileyo Imiboniso yeRed, Umququzeleli we Intengiso yeHlabathi yoKhenketho.
Iingcali kwezokhenketho ezivela kwihlabathi liphela kulindeleke ukuba zidibane kwi-Excel Exhibition Centre ngoNovemba 1-3.
Ikhuseleke kangakanani iMakethi yeHlabathi yokuHamba eLondon?
Imakethi yokuHamba yeHlabathi ikulungele ukubonisa kwihlabathi ukuba imiboniso yorhwebo inokwenzeka, ukhenketho lubuyela esiqhelweni, kwaye notyalo-mali kukhenketho kulindeleke ukuba luzise eli candelo emgceni.
ELondon nakwezinye iindawo e-United Kingdom, ii-pubs kunye neeresityu, kunye neendawo zemisitho zivulekile. Ukunxiba iimaski akufuneki ngaphandle kokuhamba kwezithuthi zikawonkewonke. Amaxabiso ehotele aphezulu, kwaye iindwendwe ziyabuya.
Kwangelo xesha, i-United Kingdom irekhode izolo i-49,139 yamatyala amatsha e-COVID-19 kunye nokufa kwe-179. Ngokuka-arthumela kwi-CNBC, Oogqirha base-UK bafuna ukubuyisela izithintelo eNgilane. Uhlobo olutsha lwentsholongwane e-UK ngoku lubonayo lusasazeka ngakumbi.
Ihlabathi lezokhenketho kwihlabathi liphela alinakulinda ukudibana nokuxhawula izandla nabahlobo bakudala kwi-WTM ezayo. Olu papasho liqabane leendaba kwiNtengiso yeHlabathi yokuHamba kwaye uMshicileli, uJuergen Steinmetz, upakisha isutikheyisi yakhe.
I-Saudi Arabia kuphela kule veki iqinisekisile ubudlelwane bayo njengomxhasi ophambili we Intengiso yeHlabathi yoKhenketho okuqhubeka kwiziko leMiboniso i-Excel eLondon ukusukela nge-1 ukuya ku-3 kwinyanga ezayo.
I-ajenda ye-WTM yeentsuku ezi-3 igcwele ngemisitho kunye neentlanganiso. I-WTM 2021 ngumboniso wokuqala omkhulu wokuhamba ukusukela oko kwaqhambuka i-COVID-19 kunye nokucinywa kabuhlungu kwe-ITB Berlin kwi2020.
Ukurhoxisa iMarike yoKhenketho yeHlabathi eLondon ngomzuzu wokugqibela kunokubangela ukudimazeka kunye ne-shockwaves kwihlabathi liphela. Kubalulekile ukuba i-WTM yenzeke ukuze kuphuculwe icandelo.
Namhlanje, uMongameli weNethiwekhi yezoKhenketho kwiHlabathi liphela kunye nengcali yezokhuseleko kwezohambo, uGqr. Peter Tarlow, uphakamise imibuzo emibini ebalulekileyo kunye neenkxalabo. Ugqirha Tarlow uya kuba sisithethi kwindawo ebonakalayo yeNtengiso yeHlabathi yokuHamba.
Nantsi into iindwendwe ezinokuyifumana kwiwebhusayithi yeWTM ngokubhekisele kukhuseleko kunye nokhuseleko ngexesha lomsitho.
Amanyathelo okhuseleko lokuya kwiNtengiso yeHlabathi yoKhenketho
I-WTM ithi kwiwebhusayithi yayo: Ukhuseleko lwakho kunye neshishini lakho zizinto eziphambili kuthi. Kwi-WTM London, unokuqiniseka ukuba bobabini basezandleni ezikhuselekileyo. Kananjalo silandela ngocoselelo ingcebiso kunye nezikhokelo zamva nje, sisebenza nabasemagunyeni kwaye phantsi kwezikhuselo zethu ezingqongqo ukubeka amanyathelo amatsha ukuhambisa umsitho okhuselekileyo ukuze uhlangane, ufunde kwaye wenze ishishini.
Oku kuthetha ukuba umsitho wethu uzakujongeka ngokwahlukileyo kulo nyaka, kodwa olu tshintsho luya kukuvumela ukonwabela amava ngelixa uzigcina, kwaye nabanye, ukhuselekile.
Bonke abantu abaya kwindibano baya kudinga ukubonisa ubungqina be-COVID-19 ukuba bangene kumnyhadala wethu. Ukufika kwakho kuyakufuneka ubonise isicatshulwa, i-imeyile, okanye udlulise ukuqinisekisa imeko yakho ye-COVID yenye yezi zinto zilandelayo:
Ubungqina bokugqitywa kwekhosi epheleleyo yokugonywa kwiiveki ezi-2 ngaphambi kokufika.
Ubungqina boVavanyo lokuhamba koMgaqo ongekho mthethweni okanye umphumo we-PCR othathwe ngaphakathi kweeyure ezingama-48 zokufika.
Ubungqina bokungakhuseleki kwendalo okuboniswe sisiphumo esifanelekileyo sovavanyo lwe-PCR ye-COVID-19, ehlala iintsuku ezili-180 ukusukela kumhla wovavanyo oluqinisekileyo kwaye emva kokugqitywa kwexesha lokuzimela.
Ababekho baya kucelwa ukuba bajonge yonke imihla ngendawo yovavanyo lwe-NHS kunye neKhowudi ye-QR. Nceda uqaphele ukuba akukho maqhosha ovavanyo lokuhamba okwenzeka mva okanye amakhadi okugonya ngokwasemzimbeni aya kwamkelwa njengobungqina obufanelekileyo besimo. Ngolwazi oluthe kratya malunga nokudlula kwe-COVID, Cofa apha.
Reed Expo, umququzeleli weWorld Travel Market, iWTM, uxelela iindwendwe:
I-WTM: Sicebisa ukuba unxibe imaski yobuso xa ukwizithuba zangaphakathi nabantu ongaqhele ukuxubana nabo.
“Imakethi yoKhenketho yeHlabathi njengomboniso ophambili kurhwebo lokuhamba ubeka imeko kungekuphela nje kumsitho wayo kodwa nakwilizwe liphela. Ukuvumela abathathi-nxaxheba ukuba bathathe inxaxheba ngaphandle kwemaski ayizukuba yinkxalabo yokhuseleko kuphela kwi-WTM, kodwa iya kuthumela umyalezo ongalunganga ngala maxesha angaqinisekanga, ”utshilo uJuergen Steinmetz, uSihlalo we-World Tourism Network.
I-WTN: Inkqubo ye- Inethiwekhi yoKhenketho yeHlabathi ukhuthaza uReed ukuba ahambe inyathelo elingaphaya ekwenzeni iimaski zobuso zibe sisinyanzelo somsitho. Le yinkqubo esemgangathweni kwiminyhadala yangaphakathi kwihlabathi liphela. Iya kuba kukungakhathali kwi-WTM ukuvumela abo bazimaseyo ukuba bazenzele ukhetho lokunxiba iimaski.
I-WTN iyenza icace nangakumbi xa iphakamisa ukuba zonke iindwendwe kufuneka zigonywe. Le yimfuno ezayo ye-IMEX America eLas Vegas, ngoNovemba 9-11.
I-Reed Expo, umququzeleli weNtengiso yeHlabathi yokuHamba, iWTM, iqinisekisa iindwendwe:
I-WTM: Ukungenisa umoya kwiziko leMiboniso i-EXCEL kuyakwandiswa, kuphuculwe ukujikeleza komoya omtsha ngokuhambelana nezikhokelo zamva nje.
I-WTN: Inethiwekhi yezoKhenketho yeHlabathi icela iZiko leMiboniso le-EXCEL ukuba liqhube isifundo kwangoko, kwaye babelane ngeziphumo zendlela esebenza ngayo inkqubo yokungenisa umoya ngokuchasene nazo zonke iAntivers ze-COVID-19 kubandakanya ezakutshanje nezichongiweyo AY.4.2 okwahlukileyo okwahlukileyo.
I-coronavirus offshoot yokwahluka kwe-Delta ngoku isasazeka ngokukhawuleza e-United Kingdom kwaye ikalwe njenge-10-15 yepesenti yosulelo ngakumbi "njengomzali" wayo ngoku olawula usulelo lweCovid-19 kwihlabathi liphela.
Oososayensi bafunda le AY.4.2 yokwahluka, kodwa ungacingi ukuba iyakuba yintlekele e-UK. Kuyafana, kukwinqanaba eliphezulu ukusukela ngoJulayi.
Ngaphandle kwe-UK, le subtype ihlala "inqabile ngokukodwa" inezinto ezi-2 kuphela ezifumaneka e-US ukuza kuthi ga ngoku.
namhlanje, IMorocco sele ivaliwe imida yayo eya e-UK.
NgoSeptemba kulo nyaka, i-Arhente yamaYeza yaseYurophu (i-EMA) yabhengeza okwahlukileyo kwe-coronavirus eyaziwa ngokuba yi "Mu" enokuba sisizathu sokukhathazeka.
Kwiiveki ezi-2 ezidlulileyo, i-United Kingdom inike ingxelo yamatyala e-COVID-19 amaninzi ngakumbi kuneFrance, iJamani, i-Itali neSpain zidityanisiwe.